ကလေးများအတွက်အခမဲ့ DIY Magnetic Building Blocks ကစားစရာများကိုကစားစရာ ၀ ယ်ပါ WoopShop®
DIY Magnetic Building Blocks ကလေးများအတွက်ကစားစရာအရုပ်
$81.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $87.99
အရောင် 150 PCS-2 150 PCS-1 150 PCs 180 PCS-2 180 PCS-1 124 PCS-1 124 PCs 62 PCS နှင့် 80 ကဒ် 180 PCs 50 PCs 68 PCs 36 PCs 113 PCs 88 PCs 100 PCS-2 100 PCS-1 100 PCs 21 PCS-1 21 PCs
မှစ. သင်္ဘောများ စပိန် ဘယ်လ်ဂျီယမ် CN ပိုလန်
150 PCS-2 / စပိန် 150 PCS-1 / ဘယ်လ်ဂျီယံ 150 PCS / CN 180 PCS-2 / စပိန် 180 PCS-1 / ဘယ်လ်ဂျီယံ 124 PCS-1 / ဘယ်လ်ဂျီယံ 124 PCS / CN 62 PCS နှင့် 80 Card / CN 180 PCS / CN 50 PCS / CN 68 PCS / CN 36 PCS / CN 113 PCS / CN 88 PCS / CN 100 ကို PCS-2 / ပိုလန် 100 PCS-1 / ဘယ်လ်ဂျီယံ 100 PCS / CN 21 PCS-1 / CN 21 PCS / CN
ကလေးများအတွက်ကစားစရာ DIY Magnetic Building Blocks - 150 PCS-2 / SPAIN backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
ပစ္စည်း: ပလပ်စတစ်၊ သံလိုက်
အသက်အပိုင်းအခြား: 4-6y, 7-9Y, 10-12Y, 13-14Y,> 14Y
Attributes: ပညာရေးဆိုင်ရာကစားစရာများ၊ ဉာဏ်အလင်းပွင့်လင်းသောကစားစရာများ၊ DIY Magnetic Building Blocks
အရွယ်အစား - ကြီးမားသောအရွယ်အစားကြီးမားသည့်သံလိုက်အဆောက်အအုံများ (ကလေးများအတွက်ပိုမိုလုံခြုံပါလိမ့်မည်)
အထုပ် - PE အိတ် (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်အခမဲ့)
60 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ.
box ကိုပြန်တယ်နှင့်အတူအနည်းငယ်ထိမိလာပါတယ်။ အဆိုပါပစ္စည်းပျှမ်းမျှအရည်အသွေးကြည့်ပေမယ့်စျေးနှုန်းသည်အလွန်ကောင်းသည်နှင့်၎င်း၏ function ကိုဖြည့်ဆည်း။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အိမ်သို့စာပို့ခြင်းဖြင့်မြန်ဆန်။ ခြေရာခံခြင်း - Russia Post EMS ။ Novosibirsk တွင် ၁၀ ရက်အတွင်းရောက်လာပြီးဒီဇိုင်နာသည်ချိုင့်ရာမှပစ္စည်းများကိုမသိမ်းဆည်းပေးသော popirka အလွှာများစွာဖြင့်ထုပ်ပိုးခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကြီးမားသောပြproblemနာကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်မထင်ပါ။ ဒီဇိုင်နာသည်ပုံမှန်၊ သံလိုက်၊ ဖြစ်နိုင်သည့်ရွေးချယ်စရာများရှိသည့်ကတ်များ၊ ပုံးသည်အလွန်သေးငယ်ပြီးပလပ်စတစ်သည်ပါးလွှာသော်လည်းယေဘုယျအားဖြင့်အေးသည်။
တကယ်တော့ထိပ်တန်းငါမဆိုင်းမတွမရှိဘဲအကြံပြုပါသည်။ အကောင်းဆုံးသောပလပ်စတစ်သေတ္တာထဲတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်အလွန်ပြည့်စုံသောသေတ္တာထဲတွင်လက်ခံရရှိခြင်းကျွန်ုပ်၏သားသည် ၄ ​​နှစ်လုံးလုံးချစ်လိမ့်မည်။
ဂရိတ်ထုတ်ကုန်မဟုတ်ဘဲခံနိုင်ရည်ပုံရသည်။ မော်ဒယ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်အတွက်စတုရန်းအစိတ်အပိုင်းများအလုံအလောက်မရှိခြင်းသည်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်သည်။ သေတ္တာလေးကငန်းလေးတစ်ခုရောက်လာတယ်။ အရောင်များထိပ်တန်းဖြစ်ကြသည်။ ပေးပို့မှုမြန်နှုန်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
လုပ်ကွက်တွေကအရမ်းအရည်အသွေးကောင်းတယ်၊ အရမ်းလှတဲ့အရောင်တွေပါ။ ငါ့ကလေးတွေကျေနပ်ရောင့်ရဲတယ်။ ပျက်စီးမှုမရှိဘူး။ အရာရာတိုင်းအဆင်ပြေပါတယ်။ သေတ္တာလေးကပလတ်စတစ်လေးပါ။ ငါမကြိုက်တာကြာပြီ။3ဤမျှကာလပတ်လုံးငါအလွန်အမင်းအကြံပြုတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ကွက်အဖြစ်
ဖောက်သည် 4.9 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ်အခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့ကို5/ 118845 ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။
အမျိုးသမီးများအတွက်ကျောဘက် Diamond Tassel Light Blue Denim Jacket
ဂျာကင်အင်္ကျီသည်ပျော်ရွှင်သည်။ Rhinestones များသည်စျေးသက်သက်သာသာဖြစ်သော်လည်းနောင်တွင်သင်၏အရာနှင့်အစားထိုးနိုင်သည်။ ဂျင်းဘောင်းဘီကိုယ်တိုင်ဝတ်လို့ကောင်းတယ်။ ငါသွားပြီးဆေးဆိုးတယ်)